Sa’a Abbaan Gaafa Cabse Hormi Ija Jaamsa” « QEERROO
Sa’a Abbaan Gaafa Cabse Hormi Ija Jaamsa”
May 4, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Ebila 3, 2017
Barruukootti utuu hin cehin, mudannoo tokko kanan qabuunan eegala.’
Guyyaa tokko yeros barataa kutaa 10n ture bara filannoo bara 2002 jechuudha. OPDO documentary hadhaa guddaa qabu, documentary dhaaba ABO hadheessu keessi isaa sobaan dhommoqu akkaataa ittiin ABOn uummata Oromoo qalu jechuun barataa agarsiisuuf galma Bulchiinsa maagaalattin keessa jiraadhuutti walitti nu qabde. Jaallan bara sana qabsoo afaan Oromoof hogbarruu akkasuma qabsoo uummatichaa waliin taasisnu faana buunee deemne. Documentary sun is banamee ilaaluu jalqabne. Wanti achirraa marti akka hadhaa qabu waan barreef dursinee walakkattii cufsiifnee gaaffilee gaggabaaboo wal harkaa fuunee dhiyeessineef gaaffiin keenya guddaan deebii dhabe gaafasii “yeroo ABOn akkas godhu kan waraabe eenyu? Inni waraabe sunis mataansaayyuu nama badii kana raawwatedha. Tole erga ABOn akkas uummata darara jettanii badii kana gaafa raawwatu kan qopheessee Video waraabe eenyu jedhama. Hamma video waraabdan abbaa yakka hamaa kana raawwate irraa deebisuuf guumaacha maaf hin goonee? Yoomiyyuu ABO uummata Oromoo irratti kana dalaguuf wixinees ta’ee kaayyoo kanaa hin qabu ” jechuun dhiitnee baane.
Guyyaa nuraasa boodas uummata agarsiisan. Gocha kana hawwaasa keenya gaafa dhaqqabsiisan; Hawwaasi hedduun gara laafessi uummataa
keessattuu dubartoonni yakka hamaa akkanaa yoo argan imimmaan haqachaa galan. Egaa abbaankoos uummata yakka Sana dhugaa se’ee fudhate ture keessaa tokko turan. Achiis gaafa galu balaaleffannaa jarri jechuun hattoonni OPDO dhaaba abdatamaarraa qaban akka himanitti fudhatee
galee tokko lamaan nuuf himuu eegale. Dhugumaan aariin guyyaa Sana aare yoomuu waanan aaru hin se’u. Achiis anis sammuunis ta’ee
guutummaankoo dhiigakoo taasisee waanan ABO of keessatti fudheef, rigatan Irree irratti Qoraattiin ABO jedhee barreesse sanaan qabe
Abbaan koo abidda natti caale. Abbaakoo gaafas itti aarus hubannaaf waan wal dhabneef har’a ittin gammada. Utuu tokko lamaan deebii
arrabaa leelaa jechaa naa laatuu, wal loluun dhufe. Waan jiruu qabatee natti utaalee dirqamaan jechakoo fudhu jechuun guddummaa OPDO waan
hololtootarraa dhaga’e lafa kaahuu eegale. Walitti buunee iyyi iyyamee ollaan nutti dirmate. Akkuma ollaan yaa’ee dhufeen ulee harkatti qabee
jiru lafa buusuun gaafa rakkoo maaltu ta’ee??? Namni gaafatu. “Rakkoo irratti na lole hamma na miidhu hubatee, lafaa kaatee maallaqa naa
kenni jetti” jechuun ollaa nurraa deebise.
An gaafas abbaankoo akka na jaallatun hubadhe. Yaadaaf wal dhabnuyyuu gaafas dabarsee nama na kennu hin taane. Rakkoo jiru
dhiisee waan biraa dubbate. Egaa isin nurra beektu ta’a, Warren ala jirtan kun utuu dubbii keessan fuula nama maraa irratti dhoobuu
dhiiftanii ija laaftuu hin taanu. Adaraa nu hin qaanessinaa! Halagaa nutti hin kofalchiisinaa! Yeroo kamuu wal mararsiifannaan keenya diina
keenyaf halagaaf dhukkuba ta’uu hubachuutu nurra ture. Badii walii gingilchaan firfirsuun halagaa gammachiisuudha. Kaayyoo jaallan
kaleessa nu cina wareegamanii dhommoqsuun dabsinee akka siyyaasaaf nuu tolutti kan fuunee deemnu taanan seenaan bor nu gaafata. Nuti warra
waan Ofii kunuunfatu ta’uu nurra ture. Jaallan xurree qabsoo eeganii asin gahaniif humaa yoo dadhabne kabaja abbuummaa laachuufin aadaa
keenya sanaaf Oromummaaf bakka laachuudha. Har’a siyyaasaa furguggisinee gamaan baasuuf hawwii warra har’a mana hidhaaf hireen
du’aa qabattee ukkaamsuun keenya dhaloota nu booda nu jaabsiisa.
Faajjii Oromoo of dura qabanii duubaan faajjii sana balleessuuf akeekuun haxxummaa miti hattummaadha. Haxxummaan kaayyoo abboota Ofii gaaga’anii utuu hin taanee waan Oromoo kaleessaa deeffatanii lafa qabsiifachuudha. Hattummaan aadaa Ofii maksuu caalu hin jiru. Nuti wal
qusachuuf kaayyoo erga dhabne kaayyoo diinaa galmaan gahaa jirra jechuudha. “Sa’a abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa ” jedha Oromoon.
Warra waliif dhiiguuf wali dhoksu nuun haa taasisu Barruu “Haxxummaa miti Hattummaadha” jedhuun wal agarra. Kana areerradhaa!!
« Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo,Wallee Haaraa Caamsaa 3,2017
Oromia News Network “ONN” »